Kulan lagu gorfeeyey nabadda gobolka Mudug oo lagu qabtay xarunta gobolka ee Galkacyo. – Radio Daljir
Seteembar 11, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Sept 11 – Kulan ballaaran oo ku aaddan nabadda gobolka Mudug ayaa lagu qabtay xarunka maamulka gobolka Mudug, kaasi oo lagu lafogurayey sida ugu habboon ee nabadda gobolka la iskaga kaashan karo.
Kulankaan oo ahaa mid uu soo qabanqaabiyey urur dhallinyaro oo ka hawlgala gobolka Mudug oo lagu magacaabo SEPDO ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas?uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka, kan magaalada Galkacyo, saraakiisha ammaanka ee gobolka, ururada dhallinyarada ee gobolka, iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan.
C/raxmaan Bashiir Jaamac, guddoomiyaha ururka soo qabanqaabiyey kulan nabadeedkaan ee SEPDO oo halkaasi ka soo jeediyey hadal dheer oo ku abaarnaa baahida loo qabo nabad buuxda oo gobolka ka hirgasha, ayaa sheegay kulankaan in ay u qabteen baahida ammaan ee gobolka ka jirta darteeda, sidaas owgeedna loo baahan-yahay bulashada gobolku in ay gacan buuxda ka gaystaan ka shaqaynta nabad-galayada gobolka Mudug.
Guddoomiyuhu waxaa uu intaasi ku daray urur ahaan muddo in ay ku howllanaayeen ka shaqeynta nabadda iyo hormarinta bulashada, sidaasi si la mid ahna looga fadhiyo dhammaanba dhallinyarada gobolku in ay isku howlaan ka shaqaynta ammaanka gobolka, iyagoo gacan buuxda siinaya mas?uuliyiinta amniga.
Sidoo kale, madaxa xisaabaadka ee hay?adda Tadaamun, hay?addii dhinaca fanka ka saacidday ururkaasi C/raxmaan C/risaaq C/raxmaan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda nabadda iyo doorka loo baahan-yahay dhallintu in ay ka ciyaaraan.
Wuxuu sheegay isla markaana uu carabka ku dhajiyey wax nolol ahi in aysan jiran haddii aan si wada jir ah looga wada shaqayn ammaanka iyo hormarka gobolka, wuxuuna soo jeediyey in hay?adaha ammaanka gacan buuxda lagu siiyo sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda xagga amniga ee loo xilsaartay.
Taliyaha qaybta bileyska gobolka Mudug Muuse C/raxmaan ?Muuse Xasaasi?, oo ka mid ahaa mas?uuliyiintii lagu marti qaaday kulankaasi nabadda gobolka Mudug, ayaa sheegay in uu ku faraxsan-yahay qabashada kulamo noocaan oo kale ah wuxuuna ammaanka in ay wax ka qaban-karaan oo kaliya haddii dadweynuhu gacan-buuxda siiyaan.
Muuse Xasaasi, wuxuu sheegay hadda in ay qorshaynayaan samaynta xarumo bileys oo laga dhax yagleeli doono xaafadaha magaalada si dadweynuhu si deg deg ah cabashadoodu u soo gaarsiiyaan xarunta bileys ee ugu dhow, taas oo uu tilmaamay in ay uga jeedaan sidii ammaanka magaalada Galkacyo loo adkayn lahaa.
Mas?uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo midka degmada oo dhammaantood ka hadlay kulankaasi, ayaa ku nuux-nuuxsaday in loo wada guntada sidii ammaanka gobolka looga wada shaqayn lahaa iyadoo laga hortagayo waxkasta oo loo arko in ay nabad-galyada liddi ku yihiin.
Sikastaba ha?ahaayee kulankaan uu qabtay ururka SEPDO ee ku saabsan nabad-galyada gobolka Mudug, ayaa ku soo beegmaya xilli bishii ugu danbaysay gudaha magaalada Galkacyo ay ka dhaceen dhowr fal danbiyeed oo dhammaantood lagula kacay dad aan waxba galaabsan.
Mudaaharaado rabshado wata oo ay ku dhinteen 3 qof, kuna dhaawacmeen 20-neeyo qof oo ka dhacay Hargeysa. [Dhegaysi …]